Truck games for kids အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（102.0MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Truck games for kids - buildahouse, car wash
ကလေးငယ်များအတွက်ထရပ်ကားများ - အိမ်တစ်လုံးတည်ဆောက်ခြင်း - ကလေးငယ်များသည်အမျိုးမျိုးသောကုန်တင်ကားများနှင့်အိမ်တစ်လုံး၊ လှေခါးထစ်၊ ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်ရေကူးကန်များမည်သို့တည်ဆောက်ရမည်ကိုလေ့လာသင်ယူသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤဂိမ်းများသည်ယောက်ျားလေးများအတွက်သာမကဂိမ်းများအတွက်ပါအခမဲ့ဖြစ်သည်။ မိန်းကလေးများအတွက်။ သင်၏ကလေးတွေသည်ကားများ၊ ကုန်တင်ကားကြီးများသို့မဟုတ်ဂိမ်းများကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအရာတစ်ခုခုကိုနှစ်သက်ပါက၎င်းသည်ကလေးငယ်များအတွက်ဤအေးမြသောလယ်ထွန်စက်နှင့်ကုန်တင်ကားများဂိမ်းကိုရူးသွပ်လိမ့်မည်! စွဲငြိဖွယ်ကောင်းသောဂိမ်းအားလုံးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးသင်၏အိမ်၊ ရေကူးကန်နှင့်ကလေးငယ်များအတွက်အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်မှုဂိမ်းတစ်ခု၏အဆုံး၌သင့်အိမ်၊ ထရပ်ကားများ၊ လယ်ထွန်စက်၊ မြေတူးစက်၊ ဘူဒိုဇာနှင့်အခြားများစွာသောဆောက်လုပ်ရေးဂိမ်းစက်များကိုဤတွင်တွေ့နိုင်သည်။
တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်စီးနင်းခြင်းသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆောက်လုပ်ရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်ယခုအချိန်တွင်အတော်လေးလွယ်ကူသည်။ အနည်းငယ်ထိသောအေးမြသောမော်တော်ယာဉ်များကိုတည်ဆောက်ပါ၊ ထို့နောက်အိမ်တစ်လုံးနှင့်ရေကူးကန်တစ်ခုပြုလုပ်ပါ။ အပေါ်တွင် ဦး စွာသင်၏ကိုယ်ပိုင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်၊ ထို့နောက်ဓာတ်ဆီဆိုင်ပေါ်တွင်ကလေးများအတွက်ဓာတ်ငွေ့ဖြည့်ရန်ထရပ်ကားများကိုဖြည့်ပါ။ ထို့နောက် building အိမ်တည်ဆောက်ရေးဂိမ်းများကိုသွားပြီးကားများ၏အကူအညီဖြင့်သင်၏အိပ်မက်အိမ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်။ ဤအခမဲ့ဂိမ်းများပြီးနောက်သင်ကားရေဆေးခြင်း၌သင်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထရပ်ကားဂိမ်းကိုဆေးကြောရပါလိမ့်မည်။ သင်သည်အိမ်တစ်လုံးမည်သို့တည်ဆောက်ရမည်ကိုသင်သိမည်ဖြစ်ပြီးမကြာမီသင်၏အိပ်မက်အကောင်အထည်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ အဆင့်မှအဆင့်သို့ပြောင်းပါ။
ဤတွင်သင်သည်ကလေးများအတွက်အမျိုးမျိုးသောမော်တော်ယာဉ်များနှင့်ရီများများစွာကိုတွေ့နိုင်သည်။ ယောက်ျားများအတွက်အခမဲ့ကစားနည်းများကိုကစားနည်းများကိုကစားနည်းများ။ အိမ်တစ်အိမ်နှင့်အတူကစား! ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကလေးများလေ့လာရန်အတွက်ကလေးများအတွက်ထရပ်ကားများစွာရှိသည်။ သင့်ကလေးကိုကားစက်ပြင်အကြောင်းသင်ပေးပါ။ ကလေးများအတွက်လယ်ထွန်စက်နှင့်ကားဂိမ်းများဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်အစစ်အမှန်ဘ ၀ နှင့်တူသည်။ ထိုအရာသည်ပညာရေးအတွက်ကောင်းသည်။
အိမ်ကိုဆောက်လုပ်ပြီးနာရီပိုင်းအကြာတွင်သင်၏ထရပ်ကားသည်ညစ်ပတ်လာသည်။ ပြဿနာမရှိပါဘူး! ကားရေဆေးရန်သွားပါ၊ အခမဲ့ကစားနည်းများတွင်ပူဖောင်းများဖြင့်ဆပ်ပြာပါ၊ ကလေးငယ်များအတွက်ကုန်တင်ကားများကိုလေ့လာပြီးအိမ်ဆောက်ခြင်း၊ ရေနှင့်ဆေးကြောခြင်း၊ ခြောက်သွေ့အောင်ပြုလုပ်ပါ။ အိမ်တအိမ် ကလေးများအတွက်ကားကစားခြင်းကိုကလေးများအတွက် ၃ နှစ်အခမဲ့ကစားခြင်းသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်!
သင်၏ထရပ်ကားလောင်စာသည်နည်းနေသလား။ ကလေးများအတွက်ထရပ်ကားဂိမ်းတွင်ဓာတ်ဆီဆိုင်ပေါ်တွင်သင်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုလောင်ကျွမ်းနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ဓာတ်ငွေ့ဖြင့်ထရပ်ကားများဖြည့်ရန်လောင်စာဆီနှာခေါင်းနှင့်အဘယ်မှာချိတ်ဆက်ရမည်ကိုရှာဖွေပါ။ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးသင့်ကား၏လောင်စာဆီတက်လာမှုကိုကြည့်ပါ။
သင်အရွယ်ရောက်ပြီးအလုပ်များနေပါကအိမ်တည်ဆောက်ခြင်းဂိမ်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးသုံးမော်တော်ယာဉ်များဖြင့်အိမ်တွင်းဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးသုံးယာဉ်များနှင့်အတူစာသင်ခန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်အမျိုးမျိုးကိုသင်ရနိုင်သည်။ သင့်ကလေးငယ်ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နာရီပေါင်းများစွာအလုပ်များနေလိမ့်မယ်။ သို့သော်သင်၏ကလေးငယ်သည်ကလေးငယ်များအတွက်လယ်ထွန်စက်ဂိမ်းများကိုစိတ်ထက်သန်စွာကစားရုံတင်မကကလေးငယ်များအတွက်ဂိမ်းတွင်အချို့သောအရာများကိုလည်းလေ့လာလိမ့်မည်။ အင်္ဂလိပ်၊ Deutsch၊ Espanola၊ ရုရှား၊ တူရကီ၊ ပေါ်တူဂီ၊ တရုတ်၊ ဂရပ်ဖစ်သည်ကလေးငယ်များအတွက်တောက်ပ။ ရောင်စုံသောကားဂိမ်းများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်နာများသည်ကလေးများအတွက်ဤထရပ်ကားဂိမ်းများကိုကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ကလေးများအတွက်ကုန်တင်ကားများ၏လုံခြုံရေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဂရုစိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကကလေးတွေကိုဂိမ်းထဲမှာတစ်ခုခု ၀ ယ်ဖို့မလွယ်ကူပါဘူး၊ သင်သူ့ကိုဂရုမစိုက်တဲ့သူပါ။
ဒီဂိမ်းဟာသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးပါ သူသည်လယ်ထွန်စက်ဂိမ်းများ၊ ကားအသံများ၊ အိမ်တည်ဆောက်ရေးဂိမ်းများကိုနှစ်သက်လျှင် ၂-၅ နှစ်အရွယ်ကလေး။
[email protected] သို့ဆက်သွယ်ပါ။ သင့်ထံမှအကြံပြုချက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်။
Truck games - buildahouse 🏡 car wash - Android Gameplay #2
How to buildahouse by trucks4| Truck game for kids | Gameplay walkthrough | BuddyFun
H . #$*ျညဘလထj... ြမ၆သ့််လထ၄သထgsysv
Wai Yan Phyo Phyo
Ko. Phone ဗမာ